Deg Deg: Taliyaha Guud ee CiidankaTurkiga oo goor dhow Muqdisho soo gaarey | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Deg Deg: Taliyaha Guud ee CiidankaTurkiga oo goor dhow Muqdisho soo gaarey
Deg Deg: Taliyaha Guud ee CiidankaTurkiga oo goor dhow Muqdisho soo gaarey
Muqdisho(SONNA) Wefigan uu hoggaaminayay Taliyaha Guud ee Ciidanka Dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa goordhow ka soo degay Garoonka Diyaaradah Aadan Cadde ee magaalaad Muqdisho halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay sida uu soo sheegayo wariyaheena Maxamed Xasan Cali .
Taliyaah Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed Janaraal Maxamed Axmed JImcaale Geedi iyo saraakiil iyo mas’uuliyiin kale oo uu ka mid yahay Danjiraha Turkiga Ambassador Olgan Baker ayaa ku so dhaweeyey Garoonka aadan Cadde halkaasi oo kulamo uu kula leeyahay Mas’uuliyiin iyo Saraakiil.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa siweyn loo adkeeyay iyadoo ciidamada Amniga ay siweyn u sugayaan nabad gelyada.
Socdaalkan ayaa horudhac u ah wefdi Ballaaran oo ka socda Dalka Turkiga kaasi oo ka qeyb gelidoona munaasabadda xarigga loooga jarayo xarun Ciidan oo Turkiga ka hirgeliyayay magaalada Muqdisho,taasi oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidanka.
Faah Faahinta warkaasi goor dhow kala soco SONNA.SO
Previous articleMusharaxiin Soomaali ah oo u tartamaya doorashada Golaha deegaanka ee Xaafadda Soomaalida ay degto ee Minneapolis +Sawiro
Next articleMareynkanka oo dalbaday in Cadaalada la horkeeno Saraakiisha Ciidamada Militariga Myanmar